आँउदो वर्षको बजेट करिब १८ खर्ब, अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले तेश्रो पटक बजेट प्रस्तुत गर्दै | Safal Khabar
आँउदो वर्षको बजेट करिब १८ खर्ब, अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले तेश्रो पटक बजेट प्रस्तुत गर्दै
विहीबार, १५ जेठ २०७७, ०८ : ३५
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्नुहुने भएको छ । दिउँसो ४ बजे संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत हुने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिनुभएको छ ।
सभामुख सापकोटाले सांसदहरूलाई बिहीबार दिउँसो पौने ४ बजेभित्र बैठकस्थलमा प्रवेश गरिसक्न निर्देशन दिनुभएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाको यो लगातार तेस्रो बजेट हो । अघिल्ला दुई बजेटमा सत्ता पक्षबाट नै आलोचना खेप्दै आउनुभएका उहाँले दुई वर्ष गाली र तेस्रो वर्ष ताली पाउने बजेट आउने भन्दै आउनुभएको छ । मुलुक कोभिड–१९ बाट आक्रान्त भई देशको आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव ३ प्रतिशतमा झरेका बेला अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिनुपर्ने र चुनावका बेला व्यक्त गरेका प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दबाबका बीच आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउँदै छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड–१९ ले क्षति पु¥याएका क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने ठोस कार्यक्रम नदेखिए पनि बजेटमा त्यससम्बन्धी राहतका प्याकेज कार्यक्रम आउने पक्कापक्की जस्तै भएको छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हाल दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता नकाटिने बताउनुभएको छ । तर, सधैं विवादको घेरामा रहेको प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूलाई दिँदै आएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष खारेज गर्नुपर्ने दबाब यसपटक पनि रहेको छ । तर, सांसदहरूले भित्रभित्रै लबिङ गरिरहेका कारण अर्थमन्त्रीलाई खारेज गर्न चुनौतीपूर्ण नै छ ।
कोभिड–१९ का कारण जारी बन्दाबन्दीले रेमिट्यान्स आप्रवाह, पर्यटन र व्यापार क्षेत्रमा संकुचन आएको छ । राजस्व असुलीमा कमी आउँदै बजेटका स्रोत सुकेका बेला ठूलो आकारको बजेट नल्याएर यथार्थपरक बजेट ल्याउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । यसपटक विगतमा जस्तो कनिका छर्ने किसिमका योजना तर्जुमा नगरी उत्पादन वृद्धि गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने भन्दै अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजनालाई मात्रै थप बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
राजस्व असुलीको लक्ष्य बढ्न नसक्ने तथा सरकारी खर्च पनि सीमित हुन सक्ने स्थितिमा चालू आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा बजेट ल्याउनुपर्ने विज्ञहरूको जोड छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपियाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ को मध्यकालीन खर्च संरचनाले तोकिएको हाराहारीमा बजेटको सिलिङ पठाइएको छ । मध्यकालीन संरचनाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार १७ खर्ब ५९ अर्ब ६ करोड ९६ लाख रुपियाँ हुने उल्लेख गरेको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ ।